Isampula seMacroinvertebrate ukubeka iliso kwiMigangatho yamanzi
Iintlobo zezinambuzane kunye namanye ama-invertebrates ahlala kumachibi ehlabathi, imilambo okanye elwandle angasitshela ukuba loo mthombo wamanzi unobungakanani obuphezulu okanye obuncinane bokungcola kwamanzi.
Kukho iindlela ezininzi zenzululwazi kunye neengingqi ezijongene nokusingqongileyo zilinganisa umgangatho wamanzi, njengokuthatha iqondo lokushisa kwamanzi, ukuvavanya i- pH kunye nokucaca kwamanzi, ukulinganisa izinga le-oksijeni echithwe, kunye nokugqiba amanqanaba ezondlo kunye nesetyhi izinto.
Kubonakala kubheka impilo yobuthakathaka emanzini kunokuba yindlela elula kwaye mhlawumbi eyona ndlela ichanekileyo ngokukodwa xa umphenyi angachaza umahluko phakathi kwesinye isizukulwana ukuya kwesinye ekuboneni iimviwo. Ingakwazi ukuphelisa imfuneko yokuhlola iikhemikhali rhoqo.
"I-Bioindicators, efana ne-canary kwi-coalmine-iindawo eziphilayo ezibonisa umgangatho wendalo yazo ngenxa yobukho okanye ukungabikho kwayo," ngokutsho kukaHannah Foster, umphandi osesikweni esiphakamileyo kwi-University of Wisconsin-Madison. Isizathu esibalulekileyo sokusebenzisa i-bioindicators kukuba ukuhlaziywa kwamachiza wamanzi kunika kuphela umfanekiso ofanelekileyo womzimba wamanzi. "
Ukubaluleka koLondolozo lweMigangatho yamanzi
Utshintsho olubi kumgangatho wamanzi womlambo owodwa lunokuchaphazela zonke izicwangciso zamanzi ezichaphazelayo. Xa ukuphuculwa komgangatho wamanzi, utshintsho lokutshala, inambuzane kunye neentlanzi kuluntu luya kwenzeka kwaye lunokuchaphazela ukutya konke.
Ngokubhekisele kwenkqubo yokubeka esweni emgangathweni yamanzi, uluntu luyakwazi ukuvavanya impilo yemifula kunye nemilambo yabo ngokuhamba kwesikhathi. Emva kokuba ulwazi olusekelwe kwimiba yomlambo luqokelelwa, ukubeka iliso emva koko kunokunceda ukuchonga nini kwaye apho kwenzeka khona ukungcola.
Ukusebenzisa ii-Bioindicators for Water Sampling
Ukwenza uphononongo lwe-bioindicators, okanye ukubeka iliso kumgangatho wamanzi, kuqukwa ukuqokelela iisampula zamanzi ama-macroinvertebrates.
Ama-macroinvertebrates ase-Aquatic ahlala emanzini ubuncinane ubuncwane bomjikelezo wabo wobomi. Ama-macroinvertebrates aphilayo ngaphandle kwe-backbones, ebonakalayo kwiso ngaphandle kokuncedisa i-microscope. I-macroinvertebrateslive yama-Aquatic, ngaphantsi nangaphezulu kweedonga kunye neendlovu kwiindawo ezinxweme zamanzi, imifula nemifula. Ziquka inambuzane, iimbungu, imisipha, iimbumba, iinqweba kunye ne-crayfish.
Ngokomzekelo, isampula ubomi obuninzi bomlambo xa umgangatho wokunakekelwa kwamanzi uluncedo kuba ezi zinto zilula ukuqokelela kunye nokuchonga, kwaye zivame ukuhlala kwindawo enye ngaphandle kokuba imeko yendalo yitshintshe. Ukubeka nje, amanye ama-macroinvertebrates anqabileyo kakhulu ekungcoliseni, ngelixa abanye bayinyamezela. Ezinye iintlobo ze-macroinvertebrates ezifunyanwe zikhula emzimbeni wamanzi zinokukuxelela ukuba loo manzi ahlambulukile okanye angcolileyo.
Eyona Nzulu Yokukhathazeka Ngcoliseko
Xa kufumaneka kumanani aphakamileyo, ama-macroinvertebrates afana namabhungane asebekhulile kunye neenkibi ezigayiweyo zingasebenza njengabalingisi bekhwalithi yamanzi. Ezi zidalwa zivame ukukhathazeka ngokungcola. Ezi zilwanyana zidla ukufuna amanqanaba e-oksijeni. Ukuba ezi zinto zakuba zikhulu, kodwa isampula esilandelayo ibonisa ukwehla kwamanani, kungabonisa ukuba kwenzeka ingozi yongcoliseko.
Ezinye izinto ezijongene nokucoceka ziquka:
i-hellgrammites (dobsonfly izibungu)
Eyona nto ixhomekeke kuNgcoliseko
Ukuba kukho ubuninzi belo hlobo oluthile lwe-macroinvertebrates, njengama-clams, i-mussels, i-crayfish kunye ne-fobufish, ezingabonisa ukuba amanzi asemgangathweni kwimeko efanelekileyo. Amanye ama-macroinvertebrates anokunyamezela ukungcola aquka:
iindiza kunye ne-damselflies (i-nymphs)
i-whirligig beetles (izibungu)
Amanye ama-macroinvertebrates, afana namanqatha kunye neepompo zasemanzini, aphumelele emanzini amgangatho omhle. Ubuninzi bezinto eziphilayo bubonisa ukuba imeko yendalo yimizimba yamanzi iye yahlakala. Ezinye zalezi zinyama zingasebenzisa "ii-snorkels" zokufikelela i-oksijini emanzini kwaye zingaphantsi koxhomekeko kwi-oksijini yokuphefumula.
Ezinye i-macroinvertebrates ezibekezelela ukungcola ziquka:
iimpukane ezimnyama (izibungu)
iindiza zeeplisi (izibungu)
Imfazwe Yehlabathi I / II: USS New York (BB-34)
Top 10 Kelly Rowland Iingoma
I-Dreidel kunye nendlela yokudlala ngayo